Tag: ọgụgụ isi azụmahịa | Martech Zone
Tag: ọgụgụ isi azụmahịa
Dika otutu oru di na ahia gi na ahia gi, imeputa akuko ndi mmadu nwere ike buru oke oru. Imirikiti ndị ahịa m maara na-etinye oge dị ukwuu n'ịchịkọta na ịgbanwe data, wee jiri aka na-ewepụta akụkọ ha chọrọ ịkọ maka mkpọsa na usoro ahịa ahịa ndị ọzọ. Funnel: Njikọ ọnụ na ihe karịrị 500 isi iyi data Funnel na-ewe ọgbaghara, siled data sitere na isi mmalite niile iji mepụta data azụmaahịa dị njikere zuru oke, nke dị ugbu a,
Ọ bụ ezie na ọgụgụ isi na-aga n'ihu na-eme ka ọtụtụ ndị nwee mkpu, m kwenyere n'onwe m na ọ ga-ewepụ ohere dị egwu maka ndị ahịa na ndị ahịa. Taa, oge dị ukwuu nke ndị na-ere ahịa na-etinye n'ọrụ mmezi teknụzụ, na-ebugharị data, na-anwale, ma na-enyocha nsonaazụ nke atụmatụ ahịa ha na nkwadebe maka mkpọsa ọzọ. Nkwa nke ai bụ na sistemụ nwere ike ịmụta site na omume anyị, yabụ teknụzụ nwere ike ịkwalite onwe ya, enwere ike ịmegharị data nke ọma, ule nwere ike
Wenezdee, Machị 8, 2017 Friday, December 1, 2017 Douglas Karr
Nkwa nke nnukwu data bụ na ụlọ ọrụ ga-enwe ọgụgụ isi karịa ha iji mee mkpebi ziri ezi na amụma banyere etu azụmahịa ha si arụ ọrụ. Ka anyị mata ihe Big Data, ihe ọ bụ, na ihe kpatara anyị ji eji ya. Nnukwu data bụ nnukwu band Ọ bụghị ihe anyị na-ekwu maka ya, mana ị nwere ike ige egwu dị egwu mgbe ị na-agụ maka Big Data. Adịghị m
Tuzdee, Machị 22, 2016 Douglas Karr
Black Ink mere ihe ọmụmụ C Marketing nke 2016, na-enyocha ndị na-ere ahịa site na ụlọ ọrụ kachasị elu 2000 kachasị elu na United States site na ntinye ego kwa afọ na mkpokọta ahia nke $ 5 ijeri dollar na ọrụ na ụgwọ. Ihe omumu ndi isi site na ihe omumu ihe omuma nke ndi ojii bu ihe ndi di nkpa bu ime ka odi nkpa na ndi mmadu gha acho ka odi nma maka akuko ihe omuma na ikike nke uzo. Tonweta nchịkọta dị elu iji mee mkpebi ndị amamihe ”bụ otu